पूर्वबाट मनसुन प्रवेश गर्दै, कहिलेदेखी सुरू होला भारी वर्षा ? « Salleri Khabar
पूर्वबाट मनसुन प्रवेश गर्दै, कहिलेदेखी सुरू होला भारी वर्षा ?
२७ जेठ, काठमाडाैँ । नेपालमा अब केही दिनमा पूर्वबाट मनसुन भित्रिने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । बङ्गालको खाडीबाट मनसुन विकसित भइसकेको र त्यो नेपाल आउने क्रममा रहेको वरिष्ठ मौसमविद् वरुण पौडेलले जानकारी दिए । उनले केही वर्षा बढ्न थालेको र आगामी हप्ताबाट भने ठाउँठाउँमा भारी बर्षासमेत हुने जानकारी दिए ।